ESI ZOO FAỊLỤ NA NCHEKWA NA WINDOWS 7 - WINDOWS - 2019
Izobe ihe zoro ezo na faịlụ faịlụ na Windows 7
Usoro faịlụ na kọmputa ahụ dị nnọọ iche site na onye ọhaneze na-ahụ ya. Ejiri ụdị àgwà dị iche iche mara ihe niile dị mkpa. "Zoro ezo" - nke a pụtara na mgbe a na-arụ ọrụ ụfọdụ, a ga-echekwa faịlụ na nchekwa ndị a site na Explorer. Mgbe enyere "Gosi faịlụ na nchekwa" a na-ahụ ihe ndị a dịka ihe oyiyi akara ọkụ.
Site na nkwekọrịta niile maka ndị ọrụ nwere ahụmahụ na-enwetakarị faịlụ na nchekwa na nchekwa, oke ọrụ nke ngosi ahụ na-atụ egwu ịdị adị nke otu data ahụ, n'ihi na onye na-anaghị ahụ anya na-echedo ha na mberede "Usoro"). Iji mee ka nchekwa nke ịchekwa data dị mkpa ọ na-atụ aro ka ọ zoo ya.
Jiri nlezianya wepu faịlụ na nchekwa.
N'ebe ndị a na-echekwa faịlụ nke usoro ọrụ dị mkpa, ihe omume na components ya. Ndị a nwere ike ịbụ ntọala, cache, ma ọ bụ ikikere faịlụ ndị bara uru. Ọ bụrụ na onye ọrụ ahụ anaghị enweta ihe ndị dị na nchekwa ndị a, mgbe ahụ ka ọhụụ na-enweghị ohere na windo "Explorer" na ijikwa nchekwa nke ịchekwa data a, a ghaghị ịkwụsị ihe mgbakwunye pụrụ iche
Enwere ike ime nke a n'ụzọ abụọ, nke a ga-atụle n'ụzọ zuru ezu n'isiokwu a.
Usoro 1: "Explorer"
Na desktọọpụ, pịa ụzọ mkpirisi abụọ. "Kọmputa m". Mgbanwe ohuru ga-emeghe. "Explorer".
N'elu aka ekpe aka họrọ bọtịnụ "Tọọ"mgbe ahụ na menu ihe a na-emeghe pịa ihe ahụ "Nhọrọ nchekwa na nchekwa".
Na obere window na-emepe, họrọ nke abụọ a kpọrọ "Lee" ma pịgharịa gaa na ala nke ndepụta nhọrọ. Anyị ga-enwe mmasị na ihe abụọ nwere nhazi nke aka ha. Nke mbụ na nke kachasị mkpa maka anyị bụ "Ezobe faịlụ na nchekwa". Ozugbo n'okpuru ya bụ ntọala abụọ. Mgbe a gbanyere nhọrọ ngosi ahụ, onye ọrụ ahụ ga - eme ihe arụ ọrụ nke abụọ - "Gosi faịlụ zoro ezo, nchekwa na draịva". Ị ghaghị ime ka ntọala nke dị n'elu - "Unu egosila faịlụ zoro ezo, nchekwa na draịva".
Na - eso nke a, lelee maka akọrọ na oke dị n'elu - "Zoo faịlụ faịlụ echedoro". Ọ ghaghị ịdị na-eguzo iji hụ na nchekwa kachasị dị egwu. Nke a mezue ntọala, na ala nke windo ahụ, pịa bọtịnụ "Tinye" ma "OK". Lelee ngosi nke faịlụ na nchekwa - ugbu a, ha ekwesịghị inwe na windo Explorer.
Usoro 2: Malite NchNhr
Ọnọdụ nke usoro nke abụọ ga-eme na windo ahụ, mana usoro ịnweta ndị a ga-adịtụ iche.
Na aka ekpe nke ihuenyo, pịa bọtịnụ ozugbo. "Malite". Na windo nke meghere, na isi ala bụ nyocha ọchụchọ, nke ị ga-eji tinye okwu ahụ "Gosi faịlụ na nchekwa". Nchọgharị ahụ ga-egosipụta otu ihe ị chọrọ pịa ozugbo.
NchNhr "Malite" mechie, onye ọrụ ahụ na-ahụ windo windo ozugbo site na usoro ahụ dị n'elu. Ị ga-eme ka ịpịgharịa ma gbanwee elekere ndị ahụ.
Iji tụnyere, nseta ihuenyo ga-agbada n'okpuru, ebe a ga-egosipụta ọdịiche dị na ngosipụta maka ụdị dị iche iche na mgbọrọgwụ nke usoro usoro nke kọmputa.
Kwadoro igosi faịlụ na nchekwa gụnyere ngosipụta nke usoro ihe nchebe.
Kwadoro ngosipụta nke faịlụ na nchekwa enwe nkwarụ ngosi nke faịlụ usoro nchekwa.
Onye nkwarụ gosipụta ihe niile zoro ezo n'ime "Explorer".
Izobe faịlụ na nchekwa na Windows 10
Ebe ịchọta folda Temp na Windows 7
Ya mere, oke ọrụ ọ bụla nwere nanị ntinye ole na ole nwere ike idezi nhọrọ ngosi maka ihe zoro ezo n'ime "Explorer". Nanị ihe a chọrọ iji rụọ ọrụ a bụ ịnwe ikike nchịkwa maka onye ọrụ ma ọ bụ ikikere dị otú ahụ nke na-enye ya ohere ịgbanwe mgbanwe na sistemụ arụmọrụ Windows.